Almost Human(2013)Season1[Complete] – Channel Myanmar Share
Original nameAlmost Human
Created byJ.H. Wyman
StarringKarl Urban, Lili Taylor, Mackenzie Crook, Michael Ealy, Michael Irby, Minka Kelly
Synopsis of Almost Human(2013)Season1[Complete]
အပိုင်း( ၁ မှ ၁၃ ) [ စ/ဆုံး]
ဒီဇာတျလမျးတှဲဟာ ၂၀၄၈ ခုနှဈမှာ လူသားတှေ စကျရုပျတှေ တိုးတကျလာတဲ့
နညျးပညာတှနေဲ့ ဆုတျယုတျလာတဲ့ ယဥျကြေးမှုစနဈတှကွေား မှ ဖွဈပကျြနတေဲ့
နညျးပညာတှတေိုးတကျလာသလို ဒုစရိုကျသမားတှကေလညျး နှိမျနှငျးရခကျလောကျအောငျ လမျးမပျေါမှာ ပြံကြဲလို့….
ဒီလိုဒုစရိုကျမှုတှကေို နှိမျနှငျးဖို့ အစိုးရဟာ စုံထောကျတှနေဲ့ စကျရုပျတှနေဲ့ တှဲဖကျပွီး
ဒီဇာတျလမျးတှဲမှာ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဇာတျလိုကျမငျးသားကွီးကတော့ The Boys စီးရီးထဲမှာပါတဲ့ Karl Urban ကွီးကိုစုံထောကျတဈယောကျအနနေဲ့တှရေ့မှာပါ…
ဒီဇာတျလမျးတှဲထဲမှာလညျး စညျးမြဥျးတှမေလိုကျနာ သူလုပျခငျြရာလုပျနပေမေယျ့ တိုကျခိုကျရေးကောငျးမှနျပွီး တျောလှနျးလို့ ရဲဌာနကနလေကျမလှတျနိုငျတဲ့ စုံထောကျကွီးပါ….အီနတောမြိုးမရှိသလို အပိုငျး(၁)ကနကေိုစပွီး ဗငျြးကွပါတယျ….
ဇာတျရှိနျကလညျး ခပျသှကျသှကျဖွဈပွီး လုံးဝကိုမပငျြးမရိ ရပါဘူး..
စိတျဝ◌ငျစားစရာလညျးကောငျးသလို အကျရှငျခနျးတှလေညျး အမိုကျစားပါပဲ…
သိပ်ပံအကျရှငျဇာတျလမျးတှဲကောငျးမို့ ကိုးရီးယားစီးရီးအမြားစုပဲ တငျဆကျပေးဖွဈနလေို့
အပိုငျး (၁၃)ပိုငျးအပွီးထိထှကျထားပါတယျ…၂ရကျတဈခါ (၂)ပိုငျးစီတငျဆကျပေးဖို့ စီစဥျထားပါတယျ…တဈပိုငျးလောကျတော့မွညျးစမျးကွညျ့စခေငျြတယျ…
ဇာတျလမျးအညှနျးနဲ့ ဘာသာပွနျသူကတော့ SCRN နှငျ့ Cynthia တို့ပဲဖွဈပါတယျ…
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ၂၀၄၈ ခုနှစ်မှာ လူသားတွေ စက်ရုပ်တွေ တိုးတက်လာတဲ့
နည်းပညာတွေနဲ့ ဆုတ်ယုတ်လာတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုစနစ်တွေကြား မှ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့
နည်းပညာတွေတိုးတက်လာသလို ဒုစရိုက်သမားတွေကလည်း နှိမ်နှင်းရခက်လောက်အောင် လမ်းမပေါ်မှာ ပျံကျဲလို့….
ဒီလိုဒုစရိုက်မှုတွေကို နှိမ်နှင်းဖို့ အစိုးရဟာ စုံထောက်တွေနဲ့ စက်ရုပ်တွေနဲ့ တွဲဖက်ပြီး
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဇာတ်လိုက်မင်းသားကြီးကတော့ The Boys စီးရီးထဲမှာပါတဲ့ Karl Urban ကြီးကိုစုံထောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့တွေ့ရမှာပါ…
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာလည်း စည်းမျဉ်းတွေမလိုက်နာ သူလုပ်ချင်ရာလုပ်နေပေမယ့် တိုက်ခိုက်ရေးကောင်းမွန်ပြီး တော်လွန်းလို့ ရဲဌာနကနေလက်မလွှတ်နိုင်တဲ့ စုံထောက်ကြီးပါ….အီနေတာမျိုးမရှိသလို အပိုင်း(၁)ကနေကိုစပြီး ဗျင်းကြပါတယ်….
ဇာတ်ရှိန်ကလည်း ခပ်သွက်သွက်ဖြစ်ပြီး လုံးဝကိုမပျင်းမရိ ရပါဘူး..
စိတ်ဝ◌င်စားစရာလည်းကောင်းသလို အက်ရှင်ခန်းတွေလည်း အမိုက်စားပါပဲ…
သိပ္ပံအက်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းမို့ ကိုးရီးယားစီးရီးအများစုပဲ တင်ဆက်ပေးဖြစ်နေလို့
အပိုင်း (၁၃)ပိုင်းအပြီးထိထွက်ထားပါတယ်…၂ရက်တစ်ခါ (၂)ပိုင်းစီတင်ဆက်ပေးဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်…တစ်ပိုင်းလောက်တော့မြည်းစမ်းကြည့်စေချင်တယ်…
ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ SCRN နှင့် Cynthia တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်…
Duration – 60min (@Episode)
Translator – SCRN & Cynthia
Episode (1) 600MB
G Drive (600 MB) Solid Drive (600 MB)Mirror(600MB)Yandex(600 MB)Mega Up (600 MB)
Episode (2) 600MB
Episode (3) 600MB
G Drive (600 MB) Solid Drive (600 MB)Mirror(600MB)Yandex(600 MB)Clicknupload (600 MB)Mega Up (600 MB)
Episode (4) 600MB
Episode (5) 600MB
G Drive (600 MB) Mirror(600MB)Yandex(600 MB)Clicknupload (600 MB)Mega Up (600 MB)
Episode (6) 600MB
Episode (7) 600MB
G Drive (600 MB) Mirror(600MB)Yandex(600 MB)Mega Up (600 MB)Solid (600 MB)
Episode (8) 600MB
G Drive (600 MB) Mirror(600MB)Fast Load(600 MB)Mega Up (600 MB)Solid (600 MB)
Episode (9) 600MB
G Drive (600 MB) Mirror(600MB)CM Download(600 MB)Solid(600 MB)Fast Load(600 MB)
Episode (10) 600MB
G Drive (600 MB) Mirror(600MB)Mirror(600 MB)Solid(600 MB)Fast Load(600 MB)
Episode (11) 600MB
G Drive (600 MB) Mirror(600MB)Solid(600 MB)Fast Load(600 MB)Megaup(600 MB)
Episode (12) 600MB
Episode (13) 600MB
G Drive (600 MB) Mirror(600MB)Fast Load(600 MB)Megaup(600 MB)
Firt air date2013-11-17
Last air date2014-03-03
Home PageAlmost Human(2013)Season1[Complete]
Sex Education season 02 (2018-)
VIP (2019)[ Complete]